Jinbiao ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး။
HEBEI JINBIAO ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ TECH Corp ။ , LTD မှ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကောင်းသောအရည်အသွေး, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကျေနပ်မှုပေးပို့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ရဲ့အရောင်းပြခန်းနှင့်ရုံးသွားရောက်ကြိုဆိုပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစပ်လျဉ်းတည်ထောင်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
Hebei Jinbiao ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု 1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဖြစ်လာ, liquidity.In Shijiazhuang 500 သန်းယွမ်, 26 ဒီဇင်ဘာလ 2014 အထိကုမ္ပဏီစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်အပေါ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်, 400 ကျော်ကိုန်ထမ်း, 40 အထူးကု, ယွမ် 60.4 သန်း၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်နှင့်အတူထက်ပို 800,000m2 ဧရိယာယူထားသော ထိုဒေသတွင်ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းဖြစ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်လည်းမှတ်ပုံတင်ကိုရွှေစံကွက်, ဆူညံသံအတားအဆီးနှင့်အလူမီနီယံ formwork အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ 90 ရဲ့အစောပိုင်းများတွင် Jinbiao "Hebei ပြည်နယ်ထူးချွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ", "ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်း", "ဘေးကင်းလုံခြုံထုတ်လုပ်မှု" နှင့်အခြားလက်မှတ်ဂုဏ်ထူး, သည် "AAA တန်းအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်" အပါအဝင် ISO9001- 2000 အရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်။
Hebei Jinbiao ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ Tech မှကော်ပိုရေးရှင်း, Ltd မှ။ Anping, တရုတ်၏ကျော်ကြားဝါယာကြိုးကွက်မြေယာအခြေစိုက်ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး, ဆူးဝါယာကြိုးများနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်နေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အီးထုတ်ကုန်လက်မှတ်ရညျအသှေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ISO9001 လက်မှတ်ရှောက် သွား. နှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိ Acoustic Institution များနှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတည်စေပြီ။ JINBIAO အပြင်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုကောင်းစွာ-အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အထူးရညျအသှေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဖွင့်ထားသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်: JINBIAO ကုမ္ပဏီကြေးနန်းကွက်ခြံစည်းရိုး, အသံအတားအဆီးနှင့်အလူမီနီယမ် Formwork အပါအဝင်3ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများရှိပါတယ်။ Daily သတင်းစာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 18km ခြံစည်းရိုး, 5000 m2 သံကိုအတားအဆီးနှင့် 8000 PCs H ကိုသံမဏိ post ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူမီနီယမ် Formwork ဒီဇိုင်းနှင့်တစ်လလျှင်ထက်ပိုမို 10 အစုံအဆောက်အဦးများအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Jinbiao ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဘို့ဝါယာကြိုးကွက်လိပ်, ကွင်းဆက် link ကိုခြံစည်းရိုး, ကြက်သားဝါယာကြိုးကွက်, သိုး / တိရစ္ဆာန်များ / လယ်ပြင်ခြံစည်းရိုး, ဆူးဝါယာကြိုးများနှင့်ဆူညံသံအတားအဆီး welded, စတုရန်း post ကိုဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်ရန်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးနဲ့ R & D ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ 80 ကျော်အစုံတပ်ဆင်ထားပြီး ဖောက်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များသေချာစေရန်တစ်ဦးစံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြည့်စုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။
သင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးလိုအပ်ချက်များအတွက်ယခုကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ!
ထုတ်လုပ်မှု ကို C ပွေး :
ထုတ်လုပ်မှု အီး quipment :
ကျွန်ုပ်တို့၏လာမယ့်ရည်မှန်းချက်ထူးချွန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်တိုင်းက client များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ပိုမိုတန်ဖိုးကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိမထင်သော်လည်း, ပျော်ရွှင်အပြည့်အဝကျေနပ်မှုဖောက်သည်မပါဘဲ, ငါတို့ကျရှုံး။ ကျနော်တို့လက္ကား, Drop သင်္ဘောရှာကြ၏။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ငျစိတျဝငျစားလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အစာရှောင်တင်ပို့!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်အောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်လော့။ ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုဆံပင်ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာအညီကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို။ ဒီ မှလွဲ. ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး OEM ဝန်ဆောင်မှုပေး။ ကျနော်တို့နွေးနွေးထွေးထွေးအနာဂတ်၌နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် OEM အမိန့်များနှင့်ဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းကွန်ယက်ကိုဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်, အစဉ်မပြတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားလျှင်, အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အနီးအနာဂတ်၌သင်တို့နှင့်အတူအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
ကျနော်တို့ကဒီလယ်ပြင်၌ထုတ်ကုန်များ၏အကြီးအမျိုးစုံဆက်ကပ်။ အပြင်, စိတ်ကြိုက်အမိန့်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်တို့သည်ငါတို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့န်ဆောင်မှုကိုခံစားပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းစကား၌, သင်တို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုမှကြိုဆိုပါ၏! ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ website.If မှမဆိုထပ်မံမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များလာ ကျေးဇူးပြု. အကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျအခမဲ့ခံစားရပါ။
ပြီးပြည့်စုံစွာပြီးစီးခဲ့သည်။ Rongwu High-spe ...